Xoghayaha difaaca ee Mareykanka oo u digay Kuuriyada Waqooyi - BBC Somali
Xoghayaha difaaca ee Mareykanka oo u digay Kuuriyada Waqooyi
Image caption Xoghayaha difaaca ee Mareykanka, James Mattis
Xoghayaha difaaca ee dalka Mareykanka ayaa uga digay Kuuriyada Waqooyi dagaalka ay iclaamisay.
Mr James Mattis ayaa ku booriyay xukuumada Pyongyang in aysan wax ficil ah sameynin, waxaana uu intaa ku daray in haddii Pyongyang ay isku daydo, ay taasi horseedi doonto dhamaadka xukuumada Kim Jong-un iyo sidoo kale burbur soo gaara shacabka dalkaasi.
Hadalka xoghayaha difaaca ee Mareykanka ayaa yimid waxyar un kaddib markii madaxweyne Trump uu sheegay in nukleyrka Mareykanka uu ka awood badanyahay sidii hore, Waxaana uu intaa ku daray in ''Kuuriyada Waqooyi ay cawaaqib xun la kulmi doonto haddii ay soo handado Mareykanka''.
Pyongyang ayaa horay u sheegtay in ay ka baraan dageyso sidii ay u weerari laheyd degaanka Guam oo ku taala dalka Mareykanka.
Sidoo kale xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Rex Tillerson ayaa isna carabka ku dhuftay in aysan jirin wax khatar ah oo Mareykanka kaga soo wajahan Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu intaa ku daray in cunaqabteyntii la saaray Kuuriyada Waqooyi ay haatan hirgashay.